HomeEntertainmentकोरियाबाट फर्केर ‘स्किन पार्लर’ खोल्ने मोडलको रहर
September 27, 2016 Entertainment 0
स्याङ्जा स्थायी घर भई पछिल्लो समय पोखरा बस्दै आएकी हिमानी गुरुङ कोरिया पुगेको सात वर्ष भयो । कोरियामा दैनिक १३ घन्टा काम गर्दै आएकी गुरुङलाई नेपाल फर्कन त्यत्तिकै हतारो छ । किन ? पंक्तिकारको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले भनिन्, ‘नेपाल फर्केर स्किन पार्लर खोल्न ।’
त्यसो त उनी रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) बाट कोरिया पुगेकी होइनन् । उनी ‘प्राइभेट भिसा’मा त्यता गएकी हुन् । श्रीमान् धर्म गुरुङ ‘बिजनेस भिसा’मा कोरियामा रहेकाले उनलाई त्यता जान सजिलो भएको हो । आइतवारबाहेक अन्य दिन बिहान ८:३० देखि बेलुका आठ बजेसम्म म्याट्रेस/बेड कभर बनाउने कम्पनीमा काम गर्ने उनले सुनाइन्, ‘एक वर्ष कोरियाली पोसाक बनाउने कम्पनीमा काम गरें । त्यसपछि यही कम्पनीमा निरन्तर काम गर्दै आएकी छु ।’
सात–सात वर्ष कोरिया रहँदा मोडलसमेत रहेकी उनले के–के गरिन् ? भनिन्, ‘घर छाडेर परदेश लागेपछि कामलाई प्राथमिकता दिनैपर्यो । थोरै समय निकालेर म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरें । पछिल्लो समय स्किन केयरसम्बन्धी क्लास लिइरहेकी छु ।’ दुई महिनादेखि स्किन केयरसम्बन्धी क्लास लिइरहेकी उनले ‘हेयर एन्ड होलबडी स्किन क्लास’ लिने सोच बनाएकी छन् । सातामा तीन दिन चार/चार घन्टा क्लास हुने भएकाले कोर्स पूरा गर्न डेढ वर्ष लाग्ने उनले बताइन् ।
नेपालमा रहँदा व्युटिसियन र मेकअप आर्टिस्टको परिचय बनाएकी मोडल हिमानी गुरुङले भविष्यमा राम्रो व्युटिसियन र मोडल बन्छु भन्ने सपना देखेकी थिइन् । इन्द्रेणी सपना नभएकाले पूरा गर्न उनलाई गाह्रो भएन । व्युटिसियन र मोडलको परिचय बनाए पनि सपना पूरा भइनसकेको उनको दाबी छ ।
त्यसो भए सपना कहिले पूरा हुन्छ त ? ‘दुवै विधामा सामान्य परिचय बनाए पनि उल्लेख्य काम गर्न सकेकी छैन । यता (कोरिया) बाट फर्केर कोरियामा सिकेको सीप नेपालमा कार्यान्वयनमा ल्याएप छि मात्रै सपना पूरा हुनेछ । नेपाल फर्केपछि स्किन पार्लर खोल्नुका साथै समय निकालेर मोडलिङलाई निरन्तरता दिनेछु । कोरियामा व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले आफूले चाहेको काम गर्न सकेकी छैन ।’ दुवै विधामा परिचय बनाएकी उनले आफूले बनाएको परिचयले धेरै खुसी लागेको प्रस्ट्याइन् । नेपाल कहिले फर्कने ? सोध्नासाथ उनले उत्तर दिइन्, ‘स्किन केयर क्लास सकिनासाथ ।’
महिलाको उमेर नसोध्नु, पुरुषको जागिर । तर, मोडल तथा व्युटिसियन हिमानी गुरुङले आफू २०४१ असार १८ गते मंगलवार जन्मेको भन्न कुनै आइतवार कुरिनन् । गुरुङका दुई छोरा नेपालमै छन् । चार म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी उनले भविष्यको योजना सुनाइन्,
‘फिल्म र टेलिफिल्ममा अभिनयका लागि थुप्रै प्रस्ताव आए पनि समय अभावले काम गर्न सकिनँ । भविष्यमा फिल्ममा अभिनय गर्ने सोच बनाएकी छु । सोच हो । पूरा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ ।’
चुलाचौकामात्रै होइन, नेपालदेखि धेरै पर कोरिया पुगेका गुरुङले ३२ वर्षको उमेरमा थुप्रै कुरा सिकेकी छन् । आफूले सिकेको सीप आफूमै सीमित राख्न नहुने मान्यताकी उनले नेपाल फर्केपछि कार्यान्वयनमा ल्याउँछु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेजस्तै कोरिया पुगेका नेपालीले सिकेको सीप नेपाल फर्केपछि कार्यान्वयनमा ल्याए वैदेशिक रोजगारीका लागि १०/१५ हजार रुपैयाँकै लागि खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यतामा कमी आउने थियो ।
गुरुङ चलचित्र ‘पा’ को हङकङमा प्रिमियर हुने, कलाकारहरुको पनि उपस्थिति रहने
रितेशराज गुरुङ र रुबिना थापाले जिते यस वर्षको ‘एन भोग’